Forex Welcome Bonus | Popular Forex Ayikho Idiphozithi Amabhonasi - 2018
Thola okungcono forex wamukelekile ibhonasi inthanethi namuhla. Thina anikeze best iseluleko indlela ukukhetha okungcono forex broker ihambelane nezidingo zakho. Funda kabanzi ngokuthi uchofoze ngezansi namuhla.
Funda Okuningi Manje
Ukuqala forex yakho Ukuhweba, sincoma kakhulu ukuthi uthole forex wamukelekile ibhonasi olunikezwayo emakethe namuhla. Forex amabhonasi onikeza forex wabathengi kumakhasimende njengoba umvuzo lapho usebenzisa amasevisi nabashintshi '. Lezi zihlanganisa usizo kusukela ochwepheshe ukuthi lwaluyobaqondisa wena ekubekeni izimali zakho nezinto isayithi ezigunyaziwe noma inkampani.
Iba abatshali bezimali abaningi, abahwebi kanye namabhizinisi bejabulela izinzuzo zokuhwebelana Forex Ukuhweba namuhla. Lapho ukusebenza forex wabathengi, wena uzokwazi ukusebenzisa ezisekelweni ukuhweba basebenzisa. Abakwazi ukukunika lezi amabhonasi uma imali yakho noma ngisho uthole kubo mahhala. Ungaphinde ukhethe ngokuvumelana uhlobo ibhonasi owufunayo owawuzovumelana izintandokazi zakho.
Hlola Out The Okukalwe Forex Ibhonasi
The Latest Forex Welcome Bonus Ungaphila Sebenzisa Namuhla
Ukuze zama forex yethu amabhonasi. Ungakhetha kusukela kulolu hlu yakamuva forex ibhonasi izipesheli siye sabona ngawe.
Kukhona futhi izinhlobo ezahlukene noma izindlela forex ibhonasi ukuthi ungakhetha. Ungazama Forex Idiphozithi Ibhonasi, Mahhala Forex Ibhonasi, noma Forex Ayikho Idiphozithi Ibhonasi. Sikukhuthaza kakhulu ukuzama lokhu ithuba lokuzuza kulezi amabhonasi. Siyakuqinisekisa ukuthi lezi zikhundla ngeke ufake imali yakho engozini.
Indlela Thola Kunembile Forex Ibhonasi
Ukuze uthole okungcono kakhulu kusuka zakamuva forex ibhonasi izipesheli emakethe, esinayo lapha iziqondiso ezimbalwa eziyisisekelo ukuthi kuyokusiza.
0.1 Hlola Out The Okukalwe Forex Ibhonasi
0.2 The Latest Forex Welcome Bonus Ungaphila Sebenzisa Namuhla
1 Indlela Thola Kunembile Forex Ibhonasi
1.1 Funda Through Forex Broker Izibuyekezo futhi Izilinganiso
1.2 Popular Forex Welcome Bonus Ukunikezwa kusukela Ethembekile Iningi Forex Brokers
2 Indlela Yokukhetha Top esiphezulu Forex Broker?
3 Isiphelo Sesimiso Ukuthola I Forex Ibhonasi
4 Izinhlobo Forex Amabhonasi kanye Imincintiswano
5 Izinhlobo Forex Brokers
6 Inkokhelo futhi Idiphozithi Izindlela
7 Forex Brokers ngu Amazwe
Into yokuqala kufanele ukwenze nje ukwazi ukubona ukuthi obani phakathi wabathengi etholakalayo yibo nge idumela elihle. Gwema wabathengi abanikela semali amabhonasi ukugwema ubungozi imikhonyovu.
Ukuze sizigweme, qinisekisa ukucinga ulwazi olubalulekile mayelana wabathengi ucabangela. I-broker kumele akwazi ukunikeza ebalulekile nemininingwane yokuxhumana futhi imininingwane ebuyekeziwe yekheli zabo ezingokwenyama. Ngale ndlela, ungakwazi ukufinyelela noma kunini uma unayo imibuzo ebalulekile, udinga usizo, noma udinga usizo uma eziphuthumayo.
Hlola ikhasimende uhlelo ukwesekwa ukuthi broker inikeza. I-broker forex ukhetha ukusebenza kufanele iphendule kuwe uma udinga ulwazi kuzo. Othembekile Forex wabathengi babe 24/7 kwamakhasimende etholakalayo.
Funda Through Forex Broker Izibuyekezo futhi Izilinganiso
Namuhla, ungathola eningi izibuyekezo amasayithi wabathengi ezahlukene 'ukuthi ungathembela lapho ngifuna broker forex ongamethemba. Lezi Izibuyekezo ukunikeza izilinganiso amasevisi nabashintshi 'kanye nokusebenza. Hlola loku ngakho uzokwazi ukubona ukuthi yimaphi wabathengi amasevisi obuphathekayo. Njengoba ufunda lezi Izibuyekezo uyobe ufunde futhi ukukhomba platform kangcono nezidingo zakho futhi okuthandayo.
Nasi uhlu lwethu enconyiwe forex wabathengi Izibuyekezo ezingakusiza ukuhlola nomdayisi forex ungasebenza, futhi unikele amabhonasi enkulu:
Popular Forex Welcome Bonus Ukunikezwa kusukela Ethembekile Iningi Forex Brokers
Qalisa nge forex yakho zokuhweba kanye nomsebenzi ne omethembayo kunazo forex wabathengi. Nalu uhlu lwamanye phezulu forex wabathengi nge inani lemali elincane ungakwazi lifake, kanye ibhonasi okuhambisanayo ungathola.
Kuya ku $10,00 Ibhonasi $100 1:400 Buyekeza Vakashela Broker
$123 Ibhonasi +100% ku zonke idiphozi! $1 1:3000 Buyekeza Vakashela Broker
101% On Idiphozithi ngamunye $100 1:1000 Buyekeza Vakashela Broker
$10 Ayikho Ibhonasi Idiphozithi $100 1:500 Buyekeza Vakashela Broker
Ubuningi 250% $1 1:1000 Buyekeza Vakashela Broker
100% Idiphozithi Ibhonasi! $100 1:2000 Buyekeza Vakashela Broker
Idiphozithi Ibhonasi kuze kufinyelele $5,000 $5 1:888 Buyekeza Vakashela Broker
Indlela Yokukhetha Top esiphezulu Forex Broker?
Nge izinkulungwane wabathengi etholakalayo, kungaba umsebenzi omkhulu ukunquma ukuthi iyiphi forex nomdayisi kungaba kuhle kuwe. Kulo post, uzothola benza uhlu izinto okufanele uzicabangele futhi sethemba, njengoba ufika zokugcina, ubungeke sinqume kakade lapho forex nomdayisi muhle kuwe.
Ziyasakazeka noma Ukuthengiselana
Forex abadayisi izindleko izindleko langempela forex kuqhathaniswa intengo yakho ukuthenga. Lokhu ibalwa Pips: ngaleyo ndlela, ephansi lemali, ngcono. Njengoba ukusabalala yilapho nabashintshi uthole imali yabo, forex abahwebi kufanele uqaphele wabathengi ukukhangisa ukuthi ungababaleli Pips. Kukhona cishe nibambe endaweni ethile ukuthi kungenzeka ukuthi awunayo ulwazi.
ongakhetha Thola ezisetshenziswa zimali ukuze bakwazi ukusizakala ekushintshashintsheni zezimali. A asizakale ngempela loan enwetshiwe by wabathengi ukuba abatshalizimali kufanele ukugcina i-akhawunti wekhasi nabo. ukuhweba Standard ngokuvamile kwenziwa 100,000 Amayunithi lwemali. Ngakho, Okwe 100:1 asizakale, abadayisi kumele lifake US $ 1,000 ku-akhawunti yakhe. I asizakale kunikeza zimali bezikhali raking e big inzuzo isihlobo ukuba utshalomali yakhe encane.
Ngokolunye uhlangothi, ezimakethe ezingqubuzana okulindele, ke ithuba lakho ukuba ukulahlekelwa futhi njengoba enkulu. Lokhu kuyisizathu esenza ukuba kube kukhona into okuthiwa i-stop order. A-stop order empeleni kuyinto igunya esilinikelwe abadayisi esishoyo ukuthi ukuhweba kuyamiswa uma ukulahlekelwa ukufinyelela noma ethile noma iphesenti.
Nge wabathengi ngokoqobo ixosha abaqalayo kule forex uhlelo ukuhweba, abahwebi kufanele okungenani nikwazi ukufinyelela broker kufanele inemithwalo ukukhathazeka ngenxa yakhe. Ngeshwa, ngoba inombolo wabathengi, inkonzo lihle phambi ukuvulwa akhawunti futhi ehlupheka kakhulu uma iklayenti ivule kakade i-akhawunti.
Forex Ukuhweba kuyinto emakethe angahlelekile. Ngakho-ke, kufanele uthole eyodwa okuyinto kulawulwa Lezimpahla Futures Ukuhweba Commission (CFTC) futhi ilungu olubhalisiwe National Futures Association (NFA).
wabathengi Good ungashiyi amakhasimende abo at ukulahlekelwa kanye beqala ukuhweba. Ngakho zinikeza amaklayenti abo nge amathuluzi adingekayo ukuze sibasize siphumelele zokuhweba. Kungenzeka i-akhawunti demo noma mhlawumbe ilungisa mayelana entsha ukuhweba imikhuba.
Cishe bonke abadayisi forex ukwenza imisebenzi yabo ngokusebenzisa internet. Hhayi kokuba isiteji yokuhweba inthanethi kuyinto senze ukuba amaklayenti.
Ukutholakala kwemali Pairs
Ummeleli ezinhle okufanele bakwazi ukudayisa le 8 zezimali ezinkulu zakwamanye amazwe: Australian Dollar (AUD), Canadian Dollar (CAD), Swiss franc angu (CHF), Euro (EUR), Pound British (GBP), Yen Japanese, kanye US Dollar (USD). Lezi zezimali yibo kakhulu elisetshenziswa zebhizinisi ngakho amanani abo iyashintshashintsha esekelwe kwaneliswe isidingo.
Ubuncane okuningi osayizi (noma amayunithi lwemali ungakwazi ukuthenga) ziyahlukahluka broker ngamunye. Uma ayaqala nje ukufunda forex Ukuhweba, ukuthola broker ingakusiza ukuba ukuthenga eziningi mini.
Brokers ukuvumela abahwebi ukuvala evulekile izikhundla ukubaluleka sangomhla namuhla futhi ukuvula babenza umsebenzi ofanayo, kusasa kodwa sibonakalisa umehluko isithakazelo phakathi ngazimbili lwemali. Nakuba lokhu ovunyelwe, kukhona amacala eyabekwa broker udinga wazi kangakanani lokushaja ukucacisa margin yakho kwi-trade.
Kungezwe amagugu, forex nomdayisi inikeza forex wamukelekile amabhonasi ezifana forex kungekho ibhonasi idiphozi, forex idiphozi ibhonasi nezinye izinhlobo forex cashback noma izaphulelo. Nge ibhonasi forex, abadayisi ungeze asizakale ukudayisa njengoba ibhonasi kuba esikhwameni eyengeziwe ngalo ungakwazi ukudayisa ngaphezulu. Lokhu kungasho lukhulu abadayisi ngoba abanye Abadayisi ezintsha ngempela ungadinga imali eyengeziwe ngisho nje ukudayisa ngenkatho ubuncane.
Ezinye izici letinikwe lapha ngenhla kungenzeka kucacile. Nokho, nabanye kudingeka ubuchwepheshe wakho e unqume ukuthi broker yakho empeleni inikeza wena best, uthi ngokuya Pips, amacala ukudluliselwa, kanye nokunye okufana nalokho. Yenza ohwlini nabashintshi ukuthi wazi futhi adayiswa nge nokusebenzisa loluhla lokuzodingidwa, ukhula aphume lezo unganikezi lokho ufuna.
Isiphelo Sesimiso Ukuthola I Forex Ibhonasi
A forex wamukelekile ibhonasi enwetshiwe by wabathengi abahwebi kungaba esikhulu siza ku-Abadayisi ezintsha. Ngoba kufike umuntu mumbe, bangakwazi ukuqala ngidayisa ibhonasi, ngaphandle empeleni ngokubeka inhloko-dolobha yabo engozini. Ngezinye okubi kakhulu, abadayisi ungalahlekelwa ingxenye eyinhloko-dolobha yakhe uma yezandla abangaphezu kuka ibhonasi kodwa kufanele kube khona ukuhweba esihle sangenza, ibhonasi empeleni kungasisiza ukuba abadayisi ukwandisa dolobha yakhe. Uma omunye ivame ukuba ephephile yokuhweba yakhe ukuthengiselana, kungenzeka abahola kwakuzoba. Okubalulekile wukuthi usebenzise i uma ngabe uzenze abathengisa ezinhle kakade, ubeke eceleni dolobha yakho yangempela, futhi ukuhweba kuphela ngaphakathi uzuza yakho ukuze capital yakho iyagcinwa.
Izinhlobo Forex Amabhonasi kanye Imincintiswano
Forex Ayikho Idiphozithi Ibhonasi Forex Idiphozithi Ibhonasi Forex Imivuzo
Forex Ibhonasi Draw Forex Isibikezelo Ibhonasi Forex Izaphulelo
Forex Imincintiswano Phila Forex Imincintiswano
Izinhlobo Forex Brokers
Forex MT4 Brokers Forex MT5 Brokers Mahhala VPS Forex Brokers
Forex Brokers ngoba Scalping Forex Brokers ngoba Scalping Zulutrade Brokers
Inkokhelo futhi Idiphozithi Izindlela
Forex Brokers ngu Amazwe
France Forex Brokers Romania Forex Brokers Forex Brokers German